Ulwandle lwamasela Hacks 🥇 Ukukopa, iAimbot, i-ESP, iWallhack- iGamepron
ULwandle lwabaphangi ethubeleza
Yazi ubugcisa bokuphanga kuLwandle lwamasela usebenzisa i-Gamepron! Ukufikelela kuLwandle lwethu olumangalisayo lwamasela Aimbot, Wallhack, ESP, nokunye okuninzi namhlanje.
Sele uthengile uLwandle lwaMasela? Fumana amanyathelo alandelayo apha
Nceda uqaphele: Ngaphambi kokuba uthenge iiLwandle zamasela, qiniseka ukuba isixhobo ojonge ukusithenga sihlaziyiwe kutshanje okanye sisekwi-intanethi. Ngelixa sihlala sihlaziya izixhobo zethu, kukho ukulibaziseka ngexesha lokuhambisa kwezinye iimeko; Ngelixa ihlala ikhawuleza, inokuthatha iiyure ezimbalwa. Zonke izixhobo zethu zitshixiwe nge-HWID, oko kuthetha ukuba ungazisebenzisa kwikhompyuter enye-qiniseka ukuba ikhompyuter yakho iyahambelana nazo zonke izixhobo zethu kwangaphambi koko. Akukho mbuyiselo iya kunikwa wakube UKUJONGE isitshixo semveliso!
Onyuliweyo wethu ULwandle lwabaphangi Hacks
Ulwandle lwamasela Hacks, Aimbot, Norecoil, ESP, Wall Hacks kunye nokunye
Thenga ULwandle lwabaphangi IiHacks ngaphakathi 4 amanyathelo
Khetha uLwandle lwamasela kwikhathalogu yethu enkulu yemidlalo yevidiyo apha eGamepron
Khetha amanqaku okuzuza oya kuthi uxhamle kwezona zininzi (sinazo zonke!)
Thenga isitshixo semveliso usebenzisa iprosesa yethu yokuhlawula ekhuselekileyo kunye neyodwa
Ukufikelela kuLwandle lwethu lweSela usebenzisa isitshixo semveliso kunye nokukhuphela!
Kutheni le nto uLwandle lweWTW lwaMasela?
Ulwandle lwamasela luza kubeka izakhono zakho zepirate kuvavanyo ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo, zonke ezinokuthi ziphathwe ngolwandle lwethu lwamasela! Similisele onke amanqaku afunekayo ukufumana inzuzo enkulu ngelixa sidlala uLwandle lwaMasela, olunokubaluleka xa abanye abasebenzi bezama ukuhlasela inqanawa yakho. Ukuba nokuchaneka kothixo kuya kuba luncedo ngendlela ecacileyo, kodwa kuthekani ngezinye zezinto ongazifumani kulwandle lwamasiko amaninzi? I-WTW inokukunceda ukufikelela kwezo kunye nokunye, konke okufuneka ukwenze kukuthenga isitshixo semveliso kunye nokukhuphela! Ukuba amanqaku kuphela akwanelanga ukukutsala, zikho ezinye izizathu zokuba kutheni iGamepron ingumboneleli # 1 wee-hacks ezikwi-Intanethi.
Isixhobo esifanelekileyo siza kukunceda ukuba ubalasele nokuba ungakanani na kwinqanaba lesakhono, olutshintsho oluhle lwesantya. Ngokwesiqhelo uza kuvuzwa kuphela xa uzimisele ukusila kumdlalo kangangeeyure, kodwa unokukhulisa izakhono zenqanaba lobungcali ngaphandle kokuziqhelanisa kwaphela. Biza iintshaba usebenzisa izixhobo ze-ESP, okanye uziphelise ngokukhawuleza ngoLwandle lwamasela Aimbot! Ukuchitha imali yakho kwiLwandle lamaTyhuthi aswelekileyo kulithuba elidlulileyo kuba iGamepron idibanisa abasebenzisi nesisombululo abanokuthembela kuso rhoqo.
Ukhuseleko yeyona nto iphambili kwaye iya kuhlala iyinto enye kwikamva elibonakalayo apha kwiGamepron, kwaye kungenxa yokuba awunakuqhekeza ukuba uvaliwe. Zininzi izinto zasimahla okanye ezingabizi mali ininzi zoLwandle lweSela kwiwebhu eziya kuthi zikunqande phantse kwangoko, yiyo loo nto abasebenzisi bekhetha ukuhlawulela iinkonzo zethu zepremiyamu. Akunyanzelekanga ukuba bakhathazeke malunga neeakhawunti zabo zokuthintelwa ukukopela, kwaye abathengi beWTW banokuhlala bethenga ngokuzithemba! Siyaziwa ngokuvelisa ii-cheats ezisemgangathweni ngesizathu, kwaye uLwandle lwethu lwamasela luhamba ngokulandela loo mkhwa.
Ukwenza nantoni na efunekayo ukuze uphumelele kufuneka ngamanye amaxesha, ngakumbi ukuba ungumntu okhuphisanayo. Akukho mntu uya kuze akuthathe kwakhona esihlalweni sobukhosi kwakhona, konke okufuneka ukwenze kukufikelela kwi # 1 yoLwandle lwabaphangi olufunyenwe kwi-Intanethi.
Ulwandle lwamasela eWall Hack (ESP)
Ulwazi loLwandle lwamasela ESP (Igama, imivalo yezeMpilo, umgama)
Ulwandle lwamasela Into ye-ESP eneefilitha
Ulwandle lwamasela Aimbot
Ulwandle lwamasela isilumkiso
Ulwandle lwamasela imowudi yokutsiba kakhulu (akukho monakalo wokuwa xa uqalile ukusebenza)
Ulwandle lwamasela amathambo kunye nenjongo ephambili enokuqwalaselwa.
Ulwandle lwaMasela lubuyise umbuyekezo
Ngokufanelekileyo ULwandle lwabaphangi yimfumba Iimbonakalo
ULwandle lwaMdlali weSela ESP
Iilwandle azizukubakho nakuphi na ukumangaliseka xa unamandla okwenza i-ESP Player yethu, ivumela abasebenzisi ukuba babone iintshaba ezikude ngeekhilomitha.
Ulwazi loMdlali i-ESP luphawu oluya kukunceda ufunde ngakumbi malunga neethagethi zakho, ezinje ngamagama abo, umgama, kunye nenani lezempilo.
Into yethu i-ESP eneempawu zokucoca ulungile ekufumaneni ubuncwane kunye nezinye izinto eziluncedo ezisasazeke elwandle (ngayo yonke le ngxaki).
Sebenzisa uLwandle lwamasela Aimbot ukufumana inzuzo enkulu kukhuphiswano lwakho! Iifoto zakho azisoze ziphoswe yile yenziwe yenziwe.
Ulwandle lweTrack Bullet track (olusebenzayo kwimigama emifutshane naphakathi)
Sebenzisa umkhondo weBullet Track ukubona apho uphononongo lwakho lufika khona, ilungele amadabi amafutshane nakumgama ophakathi kuLwandle lwamasela.
Inqaku lesilumkiso lisetyenziselwa ukwazisa abasebenzisi nanini na xa ingozi ikufuphi, nokuba lutshaba olujolise kuwe okanye nje ukusondela kwi-avatar yakho.
Imowudi yokutsiba ephezulu iya kuthintela ukonakala komdlalo ngelixa udlala uLwandle lwaMasela, ukuze ukwazi ukutsiba kwiiseyile ngaphandle kononophelo emhlabeni-awuyi kufa kukuwa!
Ulwandle lwamasela amathambo kunye nenjongo ephambili enokuqwalaselwa
Lungisa uLwandle lwamasela iAimbot ukuze ilungele iimfuno zakho ngokugqibeleleyo! Sinikezela ngethambo kwaye sijolise ekukhethweni kokukhetha phakathi kokukhohlisa.
Ulwandle lwamasela iitshekhi ezibonakalayo
Ukutshekishwa okubonakalayo kuya kuthintela i-aimbot ekujoliseni iintshaba ezingekho kwimbono yakho (ayizukujolisa kwiintshaba ngeendonga)! Gcina iindlela zakho zokukopela ziqonda.
Uhlaziyo akufuneki luchaze isiphumo semidlalo yakho kwakhona xa unaso isiQinisekiso seMbuyekezo esinikwe amandla! Ukuphinda usebenze akusengxaki.
Yiba luLwandle oluBalaseleyo loMdlali wePlanethi
Ukukhwabanisa bekuyindlela yokuya kubadlali abaninzi, kwaye ngoku unokuzuza kulwandle oluyi- # 1 lokuHacker lweSela olufunyenwe kwi-Intanethi. Sebenzisa enye indlela enexabiso eliphantsi i-Gamepron iya kuba nefuthe elibi kumava akho omsebenzisi, kwaye inokuphela ngokuvalwa! Ulwandle lwamasela ngumdlalo onzima ukuze ube yinkosi ngokwakho, kodwa ngoku unoncedo! Zithengele isitshixo semveliso kwi-WTW namhlanje.
Ulwandle oludumileyo lwamaHack Hacks kunye nokukhohlisa
Ulwandle lwamasela ESP kunye neWallhack
Olunye uLwandle lwamaHack Hacks kunye nokukhohlisa
Khuphela olona lwandle ludumileyo lwamasela kunye nokukhohlisa apha kwiGamepron! Sisebenza nenkqubo yemveliso ephambili ukunika abasebenzisi ukufikelela kwezixhobo zethu, ukuze ukhethe ukungabinamnqweno kangangoko ungathanda- ayizukutshintsha kuphela xa isiza kwinqanaba lokufikelela, kodwa inani leempawu ezikhoyo kwesi sixhobo yinto ekufuneka iqwalaselwe ngokunjalo. Sinezinto ezithandwa nguLwandle lwaMasela Aimbot, iWallhack, i-ESP, kunye nezinye ezininzi eziza kutshintsha indlela yakho kumdlalo. Ukuba awuzithembanga kwixesha elidlulileyo ungazifumana, njengoko uLwandle lwamasela luqhatha luqinisekisiwe ukukunceda uphumelele. Abanye babona bantu banobuchule kwihlabathi bakhohlisa ngokufihlakeleyo, kwaye ngubani owaziyo, abanye babo banokusebenzisa iGamepron!
Ngaba uzenzele ubabalo kwaye usebenzise # 1 uLwandle lwaMasela olukhohlakele olufunyenwe kwi-Intanethi kuthi Gamepron, awuyi kuzisola.
Ulwandle lwamasela konke malunga nokuphanga, yiyo loo nto uzama ukuhlasela iinqanawa zabanye abasebenzi kangangoko unakho. Sebenzisa uLwandle lwethu oluqhelekileyo lwamasela kunye nokukhohlisa abasebenzisi bezipho ngamandla okulawula amadabi ngokupheleleyo! Abanye abadlali baya kuwuva umsindo wakho, into esiqiniseke ngayo, konke okufuneka ukwenze kukufumana ukufikelela kuLwandle lwamasela Aimbot! Sinika abasebenzisi ithuba lokumisela i-aimbot yabo nangayiphi na indlela abafuna ngayo, nokuba sisantya esijolise kuso okanye nokuba ziindawo ezichasene nomchasi wakho. Isangqa se-FOV sinokuhlengahlengiswa ngokubhekisele kubungakanani, sikunike indawo enkulu (okanye encinci) yokujolisa ngokuzenzekelayo kwiintshaba.
Unokukhetha ukuba ngumkhohlisi onobuqhetseba ngokulawula useto lwakho ngendlela elungileyo, konke okwenziwe lula nangakumbi kwimenyu yethu yomdlalo. Akukho hacks zininzi ezenza ukuba inkqubo yohlengahlengiso ibe lula, kodwa siyayenza.
I-ESP imele “Ukuqonda okungakumbi kokuqonda”, kwaye ihlala ijongwa njengengqondo yesi-6. Ungazibona iintshaba kunye nabalingane bakho (kunye nezinto) usebenzisa inqaku lethu le-ESP, ikunike ukufikelela kulwazi obungazi malunga nokunye. Indawo yeentshaba kunye nezinto eziluncedo zifunyenwe ngokungxama xa usebenzisa uLwandle lwamasela ESP / Wallhack, ikunika ixesha elingakumbi lokugxila kwezinye izinto (njengokukhupha abachasi bakho). IiWallhacks ziyakukuvumela ukuba uveze iindawo ezigcina izinto ezifihliweyo, izifuba, kunye nobuncwane obahlukileyo abanye abadlali abanokuzijonga- awusoze uphoswe yinto exabisekileyo ngexesha logqogqo kwakhona.
Sebenza nabalingane bakho ngaphandle komthungo ngokubiza indawo zeentshaba, okanye usebenzise nje i-ESP hack ukwenza umsebenzi wakho ngokwakho. Nokuba ucwangcisa ukwenza ntoni kuLwandle lwaMasela, yazi nje ukuba inokuphuculwa ngokusebenzisa ukukopela kwethu kwe-ESP! Into ye-ESP eneefilitha ikwakhona, kwaye kukho iitoni zeefilitha oza kusebenza nazo.
Ukonakaliswa okuphezulu luphawu olukhethekileyo kwiGamepron, kwaye ivumela abasebenzisi ukuba babethe kakhulu kunzima kuninzi. Ngelixa ezinye izixhobo zinokuthi zithathelwe ingqalelo “njengokugagamela”, awudingi nokuba ziphumelele. Logama nje unawo amandla oMonakalo oPhezulu, uhlala usibetha kwindawo ekujolise kuyo kakhulu. Indawo yonyawo luphawu oluza kuvumela abasebenzisi bethu ukuba balandele phantsi iintshaba ezinje ngamaxhoba, njengoko uza kubona umkhondo weenyawo okhokelela kwindawo yabo. Oku kunokuba yingxaki kwezinye izixhobo, njengoko ungazi ukuba ukufutshane kangakanani kwithagethi, kodwa kulapho inqanaba lethu lomgama liza kudlala khona.
Umgama uya kukugcina uqaphele kwaye ukwazise ukuba utshaba lubanjiwe kwaye lulindile ezithunzini, njengoko ukubalandelela kwindawo esecaleni apho beyeke khona kunokuba yingxaki. Umgama kunye neenyawo ziyasebenza kunye ngaphandle komthungo ukuqinisekisa ukuba uhlala uphumelela xa ulandela "ixhoba" lakho!
Kukho iitoni zezinye izinto eziluncedo ezibandakanyiweyo kulwandle lwethu lwamasela, konke okufuneka ukwenze kukuthenga isitshixo semveliso kwaye unokufikelela kwangoko. I-Gamepron ifuna abasebenzisi abaninzi ukuba baxhamle kwesi sixhobo kangangoko, yiyo loo nto sigxile ekwenzeni ukhuphelo (kunye nofakelo) lwenkqubo elula. Awunyanzelekanga ukuba ufake ubuqhophololo kwikhompyuter yakho, ukungqubana neefolda zolawulo kunye neenkqubo ezinokubangela umonakalo ngenxa yoko-unokuthenga nje isitshixo semveliso kwaye ukhuphele ukukopela.
Izinto ezongeziweyo ezinje ngeRadar, ukuCacisa ukuSebenza, ukuBekwa phambili kwamathambo, kunye nokunye okuninzi kuya kwenza ukubonakala kuLwandle lwamasela, kuba ulinde ntoni? Awuyi kufumana isixhobo esigcweleyo sobukhulu naphina naphina, ngakumbi esibonelela ngenqanaba elifanayo lenkxaso yabathengi. Thenga isitshixo semveliso kwaye ubone ukuba loluphi ulwandle lolona luHhophayo lwamasela!
Ulwandle lwamasela Hacks imibuzo
Kutheni uLwandle lwethu lwamasela luHacks
Ulwandle lwethu lwamasela hacks lwakhiwe ukukunceda uchume kumdlalo, ngokuchasene nobisi nje lwemali. Uya kuthandana nesixhobo kwaye ufuna ukufikelela ixesha elide, okunokwenzeka ngenxa yemveliso yethu eguquguqukayo. Xa ufuna uLwandle oluthembekileyo lwamasela, i-Gamepron kuphela komboneleli onokuhambisa.
Kutheni uLwandle lwethu lwamasela Aimbot
Ulwandle lwethu lwamasela iAimbot ayisiyonto engenamathambo ekhoyo simahla kwiforum yokuqhekeza. Esi sisisombululo se-Aimbot seprimiyamu esinika abasebenzisi ukufikelela kuninzi lwezinto ezinokulungiswa, ekuvumela ukuba wenze ngokwezifiso amava. Khetha ukuba ufuna ukudubula bani, kwaye ufuna ukudubula phi usebenzisa uLwandle lwamasela Aimbot (afumaneka kuphela kwi-WTW).
Kutheni uLwandle lwethu lwamasela ESP
Ulwandle lwamasela luqukethe imisebenzi eyahlukeneyo, uninzi lwayo luya kwenzeka emanzini. Ukufumana izinto eziluncedo kunye neentshaba ngelixa unqumla ulwandle akufuneki ibe ngumsebenzi otyhafisayo, konke omele ukwenze kukufikelela kuLwandle lwamasela ESP. Akukho mntu unokukufihla ngolu khetho lwenziwe, ayinamsebenzi into abayenzayo!
Kutheni uLwandle lwethu lwamasela Wallhack
I-Wallhacks ziluncedo kakhulu ekuchongeni iintshaba kwelinye icala leendonga, okanye nakwabo badlala nabo xa kufanelekile. Awunyanzelekanga ukuba uqashele okanye unyanzelwe ukuba usebenzise ukuva kwakho, njengoko uLwandle lwamasela oludonga lwedonga luya kukwazisa indawo yabachasi bakho ngokukhawuleza. Kutheni uzikhathaza ngokungcakaza xa wazi ngokuqinisekileyo? Sebenzisa uLwandle lwamasela eWallhack kwaye uhlale phambili kukhuphiswano ngokucwangcisa uhlaselo lwakho, kwaye ujonge indlela ekhokelela empumelelweni.
Kutheni uLwandle lwethu lwamasela iNorecoil
Ukubuyela kwakhona kuya kuthumela umpu wakho (okanye i-musket, kuba uyi-pirate) ibhabha isuka ezandleni zakho, ngokuthetha ngomzekeliso. Iya kuchaphazela ngokuchaneka kwakho kwaye ayamkelekanga xa uzama ukugqwesa kuLwandle lwaMasela! Yisuse kumdlalo ngokunika amandla iRecoil Compensator yethu, efumaneka kuphela kulwandle lweWTW lwamasela.
Ungalukhuphela njani olona lwandle lubalaseleyo?
Ukukhuphela uLwandle oluLungileyo lwamasela kuqhele ukuba ngumsebenzi onzima kuba kufuneka ukhuphele ngesandla kwaye ufake yonke into ngokwakho. I-Gamepron iya kwenza konke okunzima kuwe, konke okufuneka ukwenze kukuthenga isitshixo semveliso kwaye uya kuba nakho ukukhuphela uLwandle lwamasela ukukopela kwangoko. Akukho kulinda kulindeleke xa usebenza nathi, konke okufumanayo ziziphumo.
Kutheni le nto uLwandle lwakho lwamasela lubiza kakhulu kunezinye?
Ukuhlawulela inkonzo yeprimiyamu kunyanzelekile kwezinye iimeko, kwaye ukuqhekeza ngokuqinisekileyo yenye yazo Sinokuqinisekisa ukuba uyafikelela kuLwandle oluPhambili lwamasela kwi-Intanethi apha kwiGamepron, kwaye konke ekufuneka ukwenzile kukuthenga isitshixo semveliso. Ulwandle lwasimahla okanye olunamaxabiso aphantsi amasela anokungakhuseleki, kodwa izixhobo zethu azibhaqwanga kwi-100%, ivumela abasebenzisi beMidlalo yePron ukuba bakhohlise ngaphandle kokukhathazeka.
I-Gamepron ilapha ukulungiselela abasebenzisi ngokusemandleni ethu, kwaye oko kubandakanya ukubonelela ngezitshixo ezahlukeneyo zemveliso onokukhetha kuzo. Sinikezela ngoLwandle lwaMasela oluza nezitshixo zemveliso kusuku olu-1, i-1-veki, kunye nenyanga-enye ongayikhetha- nokuba ungathanda kangakanani na (okanye omncinci), ungathembela kwi-Gamepron ukukunceda ufikelele kwizixhobo ezilungileyo kunokwenzeka.
Kuhle ULwandle lwabaphangi yimfumba Iimbonakalo